Yetatu beta yeWOSOS 5.1 uye tvOS 12.1 vagadziri | Ndinobva mac
Chechitatu beta yewatchOS 5.1 uye tvOS 12.1 vagadziri
Pamwe pamwe neshanduro yeIOS 12.1 umo mashoma ekuchinja anowedzerwa, Apple ichangobva kuburitsa kune vanogadzira iyo beta 3 shanduro dze watchOS 5.1 uye tvOS 12.1. Mune idzi shanduro nyowani dzevagadziri, matambudziko akaonekwa muma betas apfuura akagadziriswa, pamusoro pekuwedzera kuwedzerwa mukuchengetedzeka uye kugadzikana kwesystem.
Semazuva ese Apple haisiye tsananguro yenhau dzinoitwa mushanduro dzayo nyowani dzebeta, saka isu tichava takatarisa kuti tione izvo vanogadzira vanowana mazviri. Chaizvoizvo mukati iOS betas ndipo panowedzerwa dzimwe shanduko senge emoji Uye nezuro chaiye tanga tine iyo nyowani macOS Mojave yekumisikidza lode, iyo inowedzerawo maficha nyowani, saka zvese zvadzokera munzira.
Idzi shanduro nyowani dzinotarisirwa kuburitswa mumavhiki mashoma (pasina zuva rinotarisirwa) kana zvese zvanyatso shanda mune matatu maApple OS, uye ndokuti, semuenzaniso, kufona pamwe kusvika 32 FaceTime vanhu inofanirwa kushanda musati yashambadzwa zviri pamutemo. Isu tinovimba kuti munguva pfupi inotevera tinogona kunakidzwa neruzivo urwu zvakare iyo itsva 71 emoji nedzimwe nhau.
Iwo makuru matsva mu idzi beta 3 shanduro iwo ane hukama chaizvo nekuita uye mashandiro ehurongwa, saka usatarisira shanduko huru muWatchOS neTVOS futi. Kana tichitaura izvi, tinofanira kugara tichijekesa kuti tiri kutaura nezve maficha matsva ekushandisa, hapana nhau mukuita kana zvimwewo uye kana inyaya yenhau dzakakosha kutaura tichagovana nemi mose muchinyorwa chimwe chete ichi kana kugadzira itsva yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Chechitatu beta yewatchOS 5.1 uye tvOS 12.1 vagadziri
Mahara epurogiramu epurogiramu panguva yeEU Chirongwa Svondo
Gadzira zvimiro zvetsika zvemafaira ako neTakoy Gwaro